Ọhụụ - Imewe Mmewe
Ngwaọrụ Eji Arụ Ọrụ Ọtụtụ
Tiuzdee 17 Mee 2022
Ngwaọrụ Eji Arụ Ọrụ Ọtụtụ Ihe oru ngo a bu ezigbo ndu ndi mmadu noo n’ulo, nke ekewa n’ime uzo abuo: isi ahu na modulu nke apuru igbanwe. Isi ahu gharia igbaji, ichipu isi na iyuzo isi.Fitita gụnyere ichi eze na aji isi. mmụọ nsọ maka ngwaahịa a sitere na ndị hụrụ njem n'anya ma kwachiri akpa ha ma ọ bụ furu efu, ya mere, obere ngwugwu ghọrọ ngwaahịa a na-etinye. Ugbu a, ọtụtụ ndị na-enwe mmasị ịga njem, ya mere, ngwaahịa mkpanaaka na-aghọ nhọrọ. Ngwaahịa a na-ekwekọ n'ahịa ahịa.
Mọnde 16 Mee 2022
Pusi Bed Mgbe ị na-eke akwa ụra Catzz, mmụọ nsọ sitere na mkpa nke nwamba na ndị nwe ya, yana mkpa ijikọ ọrụ, ịdị mfe na ịma mma. Mgbe ha na-ekiri nwamba, ụdị ọdịdị ha pụrụ iche mere ka ụdị dị ọcha na nke amata. Becamefọdụ omume akparamagwa (dịka ngagharị ntị) ghọrọ nke etinyere n'ime ahụmịhe onye ọrụ. Ọzọkwa, na-eburu ndị nwe ha n'uche, ebumnuche bụ ịmepụta otu arịa ụlọ ha nwere ike ịhazi ma jiri mpako gosipụta. Ọzọkwa, ọ dị mkpa iji hụ na mmezi dị mfe. Ihe niile nke sleek, geometrical design na modular structure nyere.
Arịa Ụlọ Okomoko
Mbọsị Ụka 15 Mee 2022
Arịa Ụlọ Okomoko Nchịkọta anụ ụlọ bụ arịa ụlọ anụ ụlọ, nke emepụtara ka ha lebachara anya nke omume nke ndị enyi nwere ụkwụ anọ n'ime gburugburu ebe obibi. Echiche nke imewe bụ ergonomics na ịma mma, ebe ọdịmma pụtara nguzozi nke anụmanụ na-achọta na ohere nke ya n'ime ebe obibi, na imewe ezubere dị ka omenala nke ibi na ụlọ ọrụ nke anụ ụlọ. Nhọrọ nke nlezianya nke ihe na-emesi ọdịdị na atụmatụ nke ngwá ụlọ ọ bụla ike. Ihe ndị a, nwere nnwere onwe nke ịma mma na ọrụ, na-egbo mmuo anụ ụlọ na mkpa ịchọ mma nke gburugburu ebe obibi.
Ngwa Ngwa Egbugbere Ọnụ Eke Dịkarịsịrị Mma
Satọdee 14 Mee 2022
Ngwa Ngwa Egbugbere Ọnụ Eke Dịkarịsịrị Mma Xtreme Lip-Shaper® Sistem bu ngwaọrụ izizi imirikiti ahụaara na ntanetị na -eme ka ọsịganị dị mma na ntanetị. Ọ na - eji ụzọ 'cupping' 'China dị afọ 3,500 mee ihe - yabụ, akwara - ya na teknụzụ egbugbere ọnụ dị elu na-emegharị ọnụ ma na-eme ka egbugbere ọnụ dị ngwa ngwa. Nhazi ahụ na -emepụta egbugbere ọnụ nke nwere mkpụrụ ndụ na-egbu egbu ma dị mkpirikpi ukwu abụọ dịka Angelina Jolie. Ndị ọrụ nwere ike ịkwalite egbugbere ọnụ nke elu ma ọ bụ nke dị iche iche. Ezubekwara nke a iji bulie oghere nke ụbụ Cupid, jupụta n'ọnụ ọnụ iji bulie nkuku nke ọnụ agadi. Kwesịrị ekwesị maka ma nwoke ma nwanyị.
Fraịdee 13 Mee 2022
Okpete Teaụ tii ma ọ bụ coffeeụọ kọfị abụghị naanị ka a kwụsịchaa otu onye akpịrị kpọrọ nkụ. Ọ bụ ememe ịhapụ ịkekọrịta na ịkekọrịta. Dingtinye shuga na kọfị ma ọ bụ tii gị nwere ike ịdị nfe dịka ị na-echeta Nọmba Rome! Ma ịchọrọ otu ngaji shuga ma ọ bụ abụọ ma ọ bụ atọ, ị ga-ahọrọ otu n'ime ọnụọgụ atọ emere na shuga ma pịa ya na mmanya ọkụ gị / oyi. Otu ihe na ebumnuche gị ga-edozi. Enweghị ngaji, enweghị ntụtụ, ọ na-enweta nke ahụ dị mfe.
Ụlọ Nkịta Na-Abụ Nkịta
Tọọzdee 12 Mee 2022
Ụlọ Nkịta Na-Abụ Nkịta PoLoo bụ ụlọ mposi akpaka iji nyere nkịta aka dara ogbenye, ọbụlagodi mgbe ihu igwe dị mma n'èzí. N'oge ọkọchị nke 2008, n'oge ezumike ezinụlọ ya na nkịta ezinụlọ 3 Eliana Reggiori, onye ọkwọ ụgbọ mmiri ruru eru, chepụtara PoLoo. Ya na enyi ya Adnan Al Maleh haziri ihe nke ga - enyere ọ bụghị naanị nkịta dị mma nke ndụ, kama ọ ga - eme ka ndị nwe ha bụ ndị agadi ma ọ bụ ndị nwere nkwarụ na enweghị ike ịpụ n'ụlọ n'oge oge oyi. Ọ bụ akpaka, zere isi na ọ dị mfe iji, iburu, ọcha na ịdị mma maka ndị bi na ụlọ, maka motohome na onye nwe ụgbọ mmiri, ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelụ na ebe ntụrụndụ.
Only Right Here Onye Ji Mma Tiuzdee 17 Mee
180º North East Novel Mọnde 16 Mee
Ballo Igwe Okwu Mbọsị Ụka 15 Mee
Maachị 2022 (93)
Febrụwarị 2022 (84)
Ajụjụ ọnụ nke ụbọchị Tiuzdee 17 Mee
Chepụta akụkọ mgbe ochie Mọnde 16 Mee
Nhazi nke ubochi Mbọsị Ụka 15 Mee
Onye rụrụ ụbọchị Satọdee 14 Mee
Otu mmebe nke ụbọchị Fraịdee 13 Mee
Ngwaọrụ Eji Arụ Ọrụ Ọtụtụ Pusi Bed Arịa Ụlọ Okomoko Ngwa Ngwa Egbugbere Ọnụ Eke Dịkarịsịrị Mma Okpete Ụlọ Nkịta Na-Abụ Nkịta